Martrix code ရေးသားနည်းအခြေခံ | Myanmar Black Hacking
Myanmar Black Hacking
+++++ Dear ….. Thank you for visiting our booth at the Myanmar Black Hacking. We hope you will haveagood time and enjoyed your visit to Underground. In case we won't answer some of your questions about our Real Info, we encourage you to visit our website at www.myanmarblackhacking.com +++++ It will give youagood idea of what we can do for +++++
Rat / Keylogger
0 Martrix code ရေးသားနည်းအခြေခံ
Martrix code ဆိုတာကတော့ ဟက်ကင်းပိုင်း လေ့လာနေတဲ့ဘော်ဘော်တွေမျက်စိကျနေတဲ့ CODE အမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြမယ့် Code ကတော့ Command Prompt ကိုသုံးပြီးတော့ Batch ဖိုင်နဲ့ ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာမှာ Notepad ကိုဖွင့်ပါ
အောက်က ကုဒ်တွေကို ကော်ပီယူလိုက်ပါ
ပြီးရင် ကော်ပီကို Notpad ထဲသို့ထည့်လိုက် Save ရင် .bat နဲ့Save ပြီး Run လိုက်ပါ
Title / Name / M B H စတဲ့တေရာတွေမှာတော့ မိမိနှစ်သက်ရာကို ပြန်ပြင်ရေးနိုင်ပါတယ်
title ~~Myanmar Black Hacking~~ Matrix Re-Reloaded
echo M B H6842397349753179 109
24621345352 103 6
echo255647 1 86860 864 15646 8 803
146 847 862 157
echo589236 87125365420 8 M B H
7422892015658
echo596846 846 8426468 166 8 106 8
168 161654569 8 7
echo65 1660646 165 1 M B H
5 165 160 160434124 M B H
goto C <br>
Labels: Bat File . Knowledge
++++ "Myanmar Black Hacking" ++++ We Going On Hacking @ Knowledge @ Sharing
Donate For Victims In MM
OP_Indo / My / BD_2016
SQL Injection Vulnerable Sites For Practice
( မတွေ့ တာကြာပြီနော် :p ဟီးးးးးးး အသည်းကွဲနေလို့ နည်းနည်းပြန်ကုစားနေရလို့ ပါ :p ) sql injection vulnerable sites. Some days ago I pos...
Pastebin Accounts Hacking (Facebook/Paypal/LR/Gmail/Yahoo)
ကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေဆဲဖြစ်လို့ 99% အဆင်ပြေတယ်လို့ အာမမခံပါတယ် ကိုယ်ညဏ်ရှိသလို ကြိုးစားရင်တော့ ပွပေါက်ချည်းပါပဲ... ကဲ လုပ်ငန်းလေးစလိုက...
1500+ Google Dorks For SQL Injection
1500+ google Dorks for sql injection. Definition of google dorks: Advanced Google searches used to find security loopholes on websites...
new fresh list of Shopping SQL INJECTION Dorks 2016
new fresh list of Shopping SQL INJECTION Dorks 2016 Here - Browse_Item_Details.php?Store_Id= Category.php?cid= ...
Best Hacking E-Books Free Download In PDF 2016 ( 2016 ခုနှစ်အတွင်းမှ Hacking စာအုပ်များစုစည်းမှု )
Best Free Hacking EBooks 2016 In PDF Format :-) Best Hacking E-Books Free Download In PDF 2016 ( 2016 ခုနှစ်အတွင်းမှ Hacking စာအုပ်မျ...
အသုံးတည့်နေဆဲ " sql dorks "
sql dorks အသုံးတည့်နေဆဲ inurl:/general.php?*id=* inurl:/careers-detail.asp?id= inurl:/WhatNew.asp?page=&id= inurl:/gallery.asp?cid...
Gmail Account Recovery လုပ်နည်း /2Step ကျော်နည်း / Gmail Account ပတ်စ်ဝါးဖောက်နည်း
ဒီနည်းလမ်းကို ရေးသားထားတဲ့ မူရင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Baby Punk Ghost ဆီက ခွင့်ပြုချက်အရင်တောင်းခံထားခဲ့ပြီးမှ Public ချပေးလိုက်တာပါလို ...
+++++++ Fighting For Justice +++++++ Justice For Fighting +++++++
+++++ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် အလှူရှင်တစ်ဦးပေါ်လာခဲ့ပါပြီ :) အလှူရှင်နာမည်ကတော့ " ကိုဇော်ငြိမ်းထက် " ပါ ပြည်ပရောက် ( စင်္ကာပူ ) လို့သိရပါတယ် အလှူငွေ ပမာဏက မြန်မာကျပ်ငွေ " ၅၀၀၀၀ " ( ငါးသောင်း ) ကျပ်တိတိလှူဒါန်းတာကို MBH မှ လက်ခံရရှိပါတယ် MBH မှ ကိုဇော်ငြိမ်းထက် အလှူအတွက် ပီတိအရမ်းဖြစ်ရပါတယ် ပြီးတော့ အဲဒီအတွက် MBH ဒီဆိုဒ်မှာ ဂုဏ်ပြုရင်း မှတ်တမ်းတင်ပြီးသိမ်းဆည်းထားပေးသွားမှာပါ ပြီးတော့ အဲဒီအလှူငွေကို သဗ္ဗသုခ အသင်း သို့တရားဝင်လွှဲပြောင်းလှူဒါန်းပြီးဖြစ်ပါတယ် မကြာခင်မှာလည်း သဗ္ဗသုခ အသင်းရဲ့ ဂုဏ်ပြုလွှာကို လက်ခံပြီး အလှူရှင် ကိုဇော်ငြိမ်းထက် ရဲ့ အိမ်လိပ်စာသို့ ဖြစ်စေ ပေးပို့ ပေးသွားမှာပါ :) ကိုဇော်ငြိမ်းထက် ရဲ့ အလှူအတွက် MBH ရဲ့ အက်ဒမင်များအားလုံးကိုယ်စားပြုပြီး " သာဓု " ၃ကြိမ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အကိုရေ :) It will give youagood idea of what we can do for.
"2015 To 2016 And 2017 " Domain Donated by Min Ko Ko ( MSF ကိုရု ) Thanks A Lot " Min Ko Ko " ချစ်တုံးကြီးရေ ~ And so We can continue for Hacking , knowledge and Sharing +++++ We will do more and more as we can +++++
++++++++ Hacking Is Freedom ++++++++ Freedom Is Hacking ++++++++
~ Create © (25 , 11 , 2015) Founder Name : B@by Gh0$t F!9ht3r ~ 2018 To 2020 Domain Updated ] =--